SEO & amp; Digital Marketing - Nnyocha nke Magistral De Semalt
SEO & Digital Marketing - Nnyocha nke Magistral De Semalt
Cheedị nwere inwe ụlọ ahịa n'enweghị ihe ịrịba ama ọ bụla. N'ikpeazụ, ndị mmadụ nwere ike ịbịa chọpụta ngwaahịa ma ọ bụ rịọ ngwaahịa ndị na-adịghị na ihe ị na-ere. Ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa na aha na onwe gị na ihe oyiyi nke ngwaahịa na ị na-ere? Nke a na-akpali ndị ahịa nwere ike ịbanye, na-ajụ ajụjụ banyere ngwaahịa na ọbụna iji nweta ụfọdụ ngwaahịa. Echiche ndị a nwere ike ịfefe okwu gị na ngwaahịa gị na ndị ọzọ, nke a na-ebute site na elu ahịa na ahịa - nosql visualizations. Le akpa ihe atụ bụ otu na saịtị nke na-adịghị mma mgbe na nke abụọ atụle a saịtị ọma optimized.
Onye ọkachamara ọkachamara Shiol , Andrew Dyhan, kọwapụtara nkọwa nke usoro iji jikọta usoro SEO na nke azụmahịa.
Kedu ihe ntinye aha?
The search engine optimization (SEO) bụ usoro nke ịme ka saịtị dị mfe ịchọta, mfe à classer na onye nyocha. Dị ka ihe kasị mkpa, optimization enyere ndị ahịa aka ịchọta gị ahịa n'etiti ọtụtụ puku ma ọ bụ ọtụtụ nde ndị ọzọ na-etinyere na nke ọ bụla na-echekwa ahịa mgbasa ozi.
SEO na-eme ka ndị ọrụ na gị na ụlọ ọrụ site na-efere online. Iji mee nke a, gị Web Site ga-achọpụta ọnọdụ dị na search engine (SERP) nsonaazụ ọchụchọ. Iji mee ka nke a dị mfe nghọta, lee otu ihe atụ zuru okè:
Kwa ọnwa, a na-enyocha ihe karịrị nde mmadụ 14 n'ịntanetị. Ugbu a, chee n'echiche nke a ga-enwe ike ịchọta ihe dị ka nde mmadụ 14 na-achọ ụlọ ọrụ gị..Ọ bụrụ na ị na-enweta ozi ọma dị na saịtị gị, ọ dị mkpa ka ụlọ ọrụ dị mma na SERP, payer par clic activités et le marketing des médias sociales.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-aga n'ihu, ọ ghaghị ịmepụta ya. N'ihi na ọ bụla ụlọ ọrụ na-online, ọ bụ otu ntinye aka maka mgbasa ozi. Ịchọpụta nke gị na saịtị na-eme ka nhazi dị na peeji nke mbụ nke SERP.
Ebe ọ bụ na ọ nwere nkwenkwe ụgha na ndị mmadụ na-enyocha ihe abụọ dị na peeji nke SERP, a na-enye gị ohere ịchọta ndị na-achọ ozi gị tupu ị na - ịzụ ngwaahịa.
Olee otú ntụgharị si arụ ọrụ?
Na-arụ ọrụ na-eji ihe nchọgharị weebụ eme ihe iji chọpụta ọdịnaya nke ibe. Ha na-eme ọtụtụ ọrụ ndị na-eweta nsonaazụ ọchụchọ, gụnyere nyocha, nyochaa na ntinye aha, yana nyochaa mkpa na nkwụghachi. Ihe ndị a maara iji nye aka na ogo akara gụnyere:
Accessibility na convivialité
Page nke peeji nke
URL na aha njirimara nke Websaịtị
Foto nke ibe
Njirimara nke njikọ
Iji ghọta ihe okwu a na-arụ ọrụ, ọ dị mkpa ịbanye na nkowa banyere otú ntụgharị si arụ ọrụ:
Ozugbo a na-emechi ya, peeji ndị a na-echekwa ma ọ bụ na-edeba aha na ebe nrụọrụ weebụ ebe a na-emepụta ihe ọmụma dị mkpa mgbe ọ bụla onye ọrụ na-abanye otu mkpụrụ okwu-ama na search engines.
3. Nchọgharị ọrụ:
Mgbe ọ bụla a chọrọ nchọpụta, search engine na-azụkwa arịrịọ ma jiri ya tụnyere ọdịnaya indexed. Iji nye nkọwa ziri ezi, search engine ga-enyocha ya niile na peeji nke na-eme ka ha kwekọọ na data indexées, na aha njirimara na SERP.
Nke a bụ usoro nyocha nke a na-eme maka ịmepụta okwu na URL na amaokwu dị mkpa. Ọ na-echekwa na ị nwere ike ịzaghachite ma weghachite ibe ya na nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ na-abanye n'ime nnyocha. Ihe omuma, o nwere atọ algorithms: ndị algorithms na saịtị, hors site et sur tout le site.
Ụdị algorithm ọ bụla na-enyocha ebe dị iche iche nke ibe weebụ, gụnyere njikọta, nchịkọta akụkọ, ọtụtụ okwu na ndị balises de title. Ebe ọ bụ na search engines nọgidere na-agbanwe ha algorithms, ị kwesịrị ị na-enwe nghọta nke mgbanwe iji nọgide na-elu ọkwa.
Ihe nkesa nke usoro a na-egosi n'ime nchọpụta.
Njikọ dị n'etiti ntọala na ahịa dijitalụ
Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ọ dịghị ihe dị iche n'etiti SEO na ahịa dijitalụ, iji dokwuo anya nke a, ọ dị mkpa nke na-enyocha na en profondeur. Ihe nnoo di iche iche bu ichota nhazi. N'aka nke ọzọ, azụmahịa ahịa na-elekwasị anya na-emepụta online ụlọ ọrụ nke na-agabiga na search engines optimization. Iji nye aka n'inweta n'ahịa iji nweta ọganihu, ị ga-enwerịrị otu ụzọ nke ahịa digitaliti creddible ma tinye usoro nhazi usoro.
Ụfọdụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa na-edebanye aha gị kpamkpam dị ka ahịa ahịa. Na mgbakwunye na, ntụgharị ahụ na-agbanwe agbanwe maka otu akụkụ dị egwu nke ahịa ahịa. Iji ghọta nke a, ị ghaghị ịghọta ọtụtụ SEO a changé au fil des ans. Usoro ndị dị irè na afọ 90 ma ọ bụ 2011 bụ ugbu a na-achọ ụzọ ọhụrụ. Taa, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke na-eji wunye influencer le référencement, gụnyere ndị mediaias sociales na ndị ọrụ na-emeghị ekwekọ na past..
Ịmepụta ezigbo usoro nhazi ntọala
Iji nwee ezigbo nhazi usoro, ị ghaghị itinye usoro SEO mma. Otu ezi atụmatụ gụnyere:
1. Echere ahịa:
SEO efficient bụ bụghị naanị wunye generer nke trafic na gị na saịtị, ọ ga-enyere aka ịmepụta data ndị ahịa na ọnọdụ ebe iji hụ na ị na-enweta echiche ndị mmasị gị ngwaahịa.
2. Mbịakwute mobile:
Google chọrọ ka web saịtị na-ejikọta na ngwa igwefoto ma na-enye ndị mmadụ ọrụ ndị a, dị ka ndị ọrụ kọmputa.
3. More nhọrọ na search engines:
Iji gbakwunyere arụmọrụ, gị na saịtị ekwesịghị ịmepụta naanị n'ime search engine, kama site na ịchọpụta ihe ndị ọzọ.
4. Ndị isi okwu kwekọrọ na ntinye ego:
Na-elekwasị anya na njirimara na iji okwu ndị dị mkpa ndị mmadụ na-eji achọ nchọpụta maka iji kwado nlọghachi ego.
5. Ihe di iche iche nke di mma na ebe netwọk:
Gị na ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịbụ ndị mara mma maka ndị ọrụ, maka ịchọta ma kwesịrị inwe ọdịnaya dị mma.
N'ikpeazụ, n'ime ụwa nke algorithms, ị ga-anọgide na-achọpụta na benchmark bụ unlimited process. Ọ bụrụ na ị na-enyere gị aka na-enwe ọganihu n'etiti ndị a niile mgbanwe, na-eche banyere gị na-ezube ọha na eze, tinye ụkpụrụ nke optimization solides na-elekwasị anya na gị convivialité.